China Excavator fracturing Cylinder mveliso kunye nabenzi | Xinrun
Ngesanti kubunzulu baphantsi Jack
Isikere semoto uJack
Ngesanti kubunzulu baphantsi Ibhotile Jack
Isikhululo soMbane seHydraulic
Itreyini yaqhekeza iTraki
Truck Telescopic fracturing ...
Isilinda seHydraulic Hydraulic
HSG01-E Series fracturing cy ...
Excavator fracturing Cylinder
1.Excavator uthotho kabini esebenza emele olunye uhlobo isilinda ngesanti kubunzulu baphantsi isetyenziswa njengoko reciprocating yomgama actuator intshukumo kwinkqubo excavator ngesanti kubunzulu baphantsi. PC series isilinda ngesanti kubunzulu baphantsi luhlobo excavator imveliso isilinda ngesanti kubunzulu baphantsi uphando ngokukodwa kwaye zenziwe Komatsu kunye Kayaba technology Japan. Inempawu zoxinzelelo oluphezulu lokusebenza, ukusebenza okuthembekileyo, ukufakela okufanelekileyo kunye nokuqhaqha izixhobo, ukugcinwa ngokulula kunye nesixhobo sesixhobo. Onke amatywina alolu ngcelele lwesilinda esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi atywinwa ngaphandle. Umphezulu wentonga yepiston uqinisiwe kwaye wawutyabeka nge-chromium enzima, kwaye uburhabaxa emva kokucoca kunokufikelela kwi-Ra0.08, Itekhnoloji yokufunxa entlokweni yesilinda ye-Kayaba iphuhliswe ngokukodwa ngokweemeko zokusebenza zabembi. Izinto eziphathekayo ziyintsimbi ye-ductile, kwaye iziphelo zombini zixutywe nge-buffer edadayo. Inentsebenzo elungileyo yokukhusela. Isetyenziselwa ikakhulu ii-excavators ze-hydraulic ze-hydraulic kunye nezinye i-hydraulic excavators eziveliswe ekhaya nakumazwe aphesheya.
2. Iimpawu zoyilo lwesilinda esisebenza ngesanti kubunzulu baphantsi
A. Intonga yepiston yenziwa ngokuchanekileyo komhlaba okomelela ngamandla. Umphezulu wentonga yepiston uyacinywa ngesantya esiphakathi ukuya kubunzima obukhulu be-HRC62. Umphezulu wentonga ye-piston uvalwe ngombhalo onzima kwaye upolishiwe ukuze unike umphezulu onganyangekiyo ukuthintela ipiston ekutsaleni nasekubethekeni, ubomi obuninzi betywina bunento yokhuseleko okungenani amaxesha ama-5 amandla eqine kuxinzelelo olulinganisiweyo kwinqanaba elincinci lomnqamlezo intonga yepiston kunye nebandla lepiston.
B. Umkhono wesikhokelo wenziwe nge-iron ductile ngokwendawo yokumba. Yenziwe nge-iron edibeneyo kwaye ine-high wear wear. Lixhotyiswe ethwele ukutyibilika kwamanye amazwe evela eJapan. Uxinzelelo oluphezulu lokuthwala ngu-270n / mm2, umthwalo onamandla ngu-140n / mm2, isantya esiphezulu siyi-5m / s, ukungqinelana kokungqubana kungu-0.02 ~ 0.07, iqondo lobushushu elisebenzayo li-200 ° C ukuya kuma-280 ° C, kwaye indawo ekhokelayo inciphisa uxinzelelo ukuya kwinqanaba eliphezulu ukumelana nomthwalo omkhulu wecala, Yandisa ubomi bezilinda zombini kunye netywina.
C. Itywina lepiston yentonga yenziwa ngomsesane wothuli, iringi yetywina yepiston kunye ne-hydraulic buffer, enokuthintela ngokufanelekileyo ukuvuza kweoyile ye-hydraulic yentonga yepiston. Isangqa sothuli siyimisesane yomlomo ophindwe kabini. Umsebenzi wawo kukuthintela uthuli, ubumdaka, isanti kunye neetshipsi. Ithintela kakhulu ukukrwela, ikhusela indawo yesikhokelo kwaye yenze ukuba ixesha lokuphila litywinwe. Umlomo wokutywina ophakathi unciphisa ifilimu eseleyo yeoyile. Izinto ze-polyurethane ziqinisekisa ukubalasela kokukhuhlana okomileyo kwaye zonyusa ukumelana nokunxiba, Ngenxa yokuxhathisa kwayo i-ozone kunye nemitha ebangelwa ziimeko zemozulu, ubomi benkonzo buqhubeka. Iqondo lokushisa elisebenzayo lisuka kwi-35 ° C ukuya kwi-100 ° C, kwaye umphezulu wesantya ungaphantsi kwe-2 m / s. Isazinge sokutywina esiphambili sentonga ye-piston litywina lomlomo lomlomo elinemilebe emibini yokutywina kunye nokuqina okuxineneyo kububanzi bangaphandle. Ngenxa yesithambisi esongeziweyo phakathi kwemilebe yomibini, kuthintela ukungqubana okomileyo kunye nokunxiba, iyayichasa ifuthe kunye nokukhutshwa, kwaye iphucula ukusebenza ngokutywina phantsi koxinzelelo lweqanda. Uxinzelelo olusebenzayo yi-40MPa, iqondo lobushushu elisebenzayo li-35 ukuya kwi-110 ℃, kwaye umphezulu wesantya ungaphantsi kwe-0.5m / s. Umsebenzi wesikhuseli seHydraulic kukufunxa ifuthe kunye nokutshintsha koxinzelelo phantsi komthwalo omkhulu, ukwahlula ubushushu obushushu obuphezulu, kunye nokuphucula ukuzinza kwamatywina. Uxinzelelo oluphezulu lunokufikelela kwi-100MPa. Ngenxa yomjelo okhethekileyo wemilo kwilembe elityibilikayo elinokukhulula uxinzelelo lwangasemva, inokuphelisa uxinzelelo phakathi kweringi yokutywina kunye ne-buffer yentsimbi enqamlezileyo, kwaye idlulisele uxinzelelo olwenziwe phakathi kwetywina eliphambili kunye nesitywina se-buffer inkqubo.
D. Itankana lesilinda lenziwe nge-alloy yensimbi i-27SiMn enamandla aphezulu, imilo encinci kunye nobunzima bokukhanya, aziwa kwaye yaqengqeleka ukuya kugqatso oluphezulu, ukwenzela ukunciphisa ukungqubana kwangaphakathi kunye nokwandisa ubomi benkonzo yesitywina.
E. I-piston esemgangathweni iphosa ngezinto ezimbini ezihambelana nentonga yepiston. Le piston itshixiwe ngokuqinileyo ngomsonto Screw phakathi nut kunye piston nut, ukuze kuqinisekiswe umsebenzi oluthembekileyo phantsi koxinzelelo oluphezulu kunye namalungu. Onke amatywina episton angeniswa kwimveliso yeParker kunye neNOK. Zombini iziphelo zepiston zifakelwe umsesane omdaka nge-4 mm eyenziwe nge-PTFE. Njengoko inomsebenzi wokuntywiliselwa kokungcola, ioyile inokuthintelwa ukuba ingonakali ngenxa yokuxubana nezinto zangaphandle, ukuze kuqinisekiswe ukuba itywina linobomi obude benkonzo kwaye linokudlala indima ekhokelayo nexhasayo. Isangqa esixhasayo sinoxinzelelo oluphezulu lokuthwala, olunokuphelisa yonke into yesinyithi kunxibelelwano lwesinyithi phakathi kwepiston kunye nebhloko yesilinda, ukubonelela ngomthamo omkhulu wokuthwala osecaleni, ukufunxa ifuthe, ukwandisa indawo yoqhakamshelwano kunye nokuphepha ukukrwela ibhloko yesilinda. Isitywina se-piston samkela uhlobo oluvulekileyo lwe-Pak, olunezibonelelo zokuchasana nomthwalo wempembelelo, ukunganyamezelani okuphantsi kunye nokufakwa okulula. Ngenxa yokusebenza okhethekileyo kwendandatho yokutywina, inamandla okumelana nokukhutshwa ngaphandle koxinzelelo oluphezulu kunye nemvume enkulu, kwaye uxinzelelo olusebenzayo luphezulu njenge-50MPa.
F. Umkhono we-buffer onentonga ngumkhono we-centering, onokuhlengahlengisa ukugxila, kwaye ngenxa yokuba kukho umsantsa omkhulu phakathi komkhono wesikhondo kunye nepiston, uxinzelelo lokuqala lunokuncitshiswa. I-buffer plunger yamkela umda webhola yentsimbi, enokuntywila. Umkhono wesikhuseli kunye nesiponco sempazamo uneempawu zokudada. Ke ngoko, inokuba nesikhewu esincinci kakhulu, ilungelelanise ngokuzenzekelayo iziko kwaye isuse impembelelo yemposiso ye-coaxial shaft. Ukusebenza kwe-buffer kulungile, kunokunciphisa ingxolo kunye nomthwalo wempembelelo kwaye wandise ubomi benkonzo kumatshini.
Okulandelayo: HSG01-E Series fracturing Isilinda
Iindidi ze-Hydraulic Cylinder
Isilinda esincinci seHydraulic
Welded fracturing iisilinda
HSG01-E Series fracturing Isilinda
Iinkcukacha zeMveliso I-HSG uhlobo lobunjineli lombhobho we-hydraulic cylinder yinto ephindwe kabini yokubamba enye ipiston ye-hydraulic cylinder, eneempawu zesakhiwo esilula, ukusebenza okuthembekileyo, ukuhlanganiswa okufanelekileyo kunye nokuqhaqha, ukugcinwa okulula, isixhobo se-buffer kunye neendlela ezahlukeneyo zonxibelelwano. Isetyenziswa ikakhulu koomatshini bokwakha, ukuhambisa, ukuhambisa ngenqanawa, oomatshini bokuphakamisa, oomatshini bemigodi kunye namanye amashishini. Uphando kunye noYilo 1 Inkampani yethu ineenjineli ezi-6 ezineminyaka engama-20, iminyaka engama-40 ...
Piston fracturing Isilinda
Iinkcukacha zeMveliso: 1.I-Hydraulic cylinder bore I-cylinder bore iya kukhethwa ngokwexinzelelo lomsebenzi, ubushushu bomsebenzi, imeko yomsebenzi kunye nezinye iimfuno ezizodwa. 1.1 Isilinda Ityhubhu: ingqele ezotywe ngqo ingenamthungo ityhubhu yesinyithi, eshushu iqengqiwe ityhubhu yentsimbi engenamthungo, ityhubhu yomgunyathi. 1.2 Izinto zeTyhubhu: SAE1020 (20 #), SAE1045 (45 #), 16Mn (Q345B), 27SiMn, njl. Ubungqingqwa bomphezulu be-1.3: R0.16-0.32μm 1.4 Ngaphakathi kwi-Chromating: Ukuba kukho imfuneko, ngaphakathi ityhubhu iya chromated. 2.Piston intonga 2.1 Intonga Material: 35 #, SAE1045 (45 #) ...
Iinkcukacha zeMveliso 1.Yiyo ikakhulu kuthi eyenzelwe ukumbiwa okukhulu kunye naphakathi. Ilungele iimeko zoxinzelelo oluphezulu lwe-350 kgf / cm ^ 2 kunye nobushushu be-20 ℃ - 100 ℃ (indawo ebandayo ngu - 40 ℃ - 90 ℃). Iimpawu eziphambili 2.a. Ubungakanani obukhulu, ubunzima bokukhanya kunye namandla aphezulu: ukhetho lwezixhobo, itekhnoloji yokuqhubekeka kunye netekhnoloji ye-welding yomzimba wesilinda kunye nentonga yepiston yamkelwe ngokwamandla, uyilo lokukhathala kunye nentengiso ...
Truck Telescopic fracturing Cylinder
Iinkcukacha Product 1.Telescopic isilinda ngesanti kubunzulu baphantsi ikwabizwa ngokuba ngezigaba isilinda hydraulic. Iqukethe iisilinda zepiston ezimbini okanye ezikwinqanaba elininzi, ikakhulu ezenziwa yintloko yesilinda, isilinda umphanda, umkhono, ipiston kunye nezinye iindawo. Kukho amazibuko ongezelelweyo kunye nawokuphuma a kunye no-B kwiziphelo zombini zombhobho wesilinda. Xa ioyile ingena kwizibuko kunye neoyile ibuya kwizibuko B, ipiston yokuqala yenqanaba elinendawo enkulu esebenzayo iyatyhalwa, emva koko inqwanqwa lesibini lesigaba sentsimbi sihamba. Kungenxa yokuba inqanaba lokuhamba ...
Isilinda seHydraulic Flap Telescopic Cylinder
Iinkcukacha zeMveliso yeHydraulic flap luhlobo lwezixhobo zokukothula izixhobo zale mihla. Ngethuba nje ixhaswe, inokuzenzekelayo kwaye ikhuphe ngokuthe ngqo izinto. Ukulayishwa kokusebenza kuphezulu kakhulu kwaye uthuli lincinci. I-dumper kufuneka iqale imoto yesikhululo se-hydraulic ukwenza ingalo yoxinzelelo inyukele kwindawo ephezulu, kwaye emva koko imoto elayishwe ngokupheleleyo ye-gondola itsalwa ngumatshini onzima wokutsala inqwelomoya, kwaye ibekwe kwimoto exhasa umqadi we-dumper. I-vibrator yeplate yangasemva bubofu ...
HAYI. 30 Huanghe Road, iZowuni yoPhuhliso lwezoQoqosho yaseLiaocheng, eShandong, China